Kubantu abaningi, yilokho umsebenzi we-YouTuber obonakala uhlanganisa. Vele uhlale phansi phambi kwekhamera futhi wenze amavidiyo ngokudla ukudla, ukwenza amakhono wokuzilungiselela, noma udlala nje imidlalo ye imidlalo yevidiyo futhi uzokwenza imali kuyo yonke imibono oyitholayo.
2.7 I-Kickstarter- ը
2.8 I-Patreon- ը
3 Ուկուբա I-YouTuber
Ukuba yisiteshi esisodwa esibhalisiwe ku-YouTube, i-PewDiePie ithola kalula imali engaphezu kwezigidi ezingu- $ 12 minyaka yonke kusukela kuyo yonke imizamo yakhe nangaphezulu. Esinye isiteshi, i-Rooster Teeth Company yokudlala nokuzijabulisa, ihola i- $ 13 միլիոն minyaka yonke, kuyilapho iziteshi ezincane njenge-Nigahiga ne-Epic Meal Time zithola i- 2.9 $ yezigidi kanye ne- $ 3.1 միլիոն $.
Ake sithi usuvele usungulwe isiteshi futhi ulayishe amavidiyo ambalwa, ungaqala ngokushesha ukuthola i-YouTube ngokuvula i-YouTube unike amandla ukwenza imali akhawunti yakho bese ubhalisela Google AdSense.
Ukunika amandla isici sokwenza imali se-YouTube: Ukungena> Իսիտեշին> Իսիմո նեզիչին> Ukwenza imali (անուն, Chofoza lapha).
Okokugcina, kuzodingeka ufake isicelo se-a Uhlelo lokubambisana lwe-YouTube Uhlelo oluzokunika izinzuzo ezimbalwa ku-akhawunti yakho, njengamathuluzi wokuhlaziya, amathuluzi okuhlela Athuthukid u uka uuko Ukuze ube nguzakwethu we-YouTube, kuzodingeka ube nokubuka komphakathi kwe-10,000 esiteshini sakho (isib. Ukubukwa kwe-1,000 kumamavidiyo we-10) futhi kubuyekezwe yi-YouTube ukuba abe nguzakwethu we-YouTube oqinisekisi.
I-YouTube ibonisa ukubonakala (uma umbukeli echofoza noma ebukela izikhangiso zakho) nakuwo wonke umbono we-1.000, uzothola cishe i- $ 7.50: Inkinga indlela ukucabanga ngayo kubalwa ngayo, njengoba kuncike kakhulu ekusebenziseni izethameli zakho. Uma umbukeli enquma ukweqa ngezikhangiso noma ukusebenzisa i-ad-block, ngeke ukwazi ukukhokhelwa umbono. Ngenxa yalokho, ukubukwa okuphezulu akusho ukuthi kuhumushe ividiyo ezuza kahle. Ividiyo enezibuko ze-10,000 ingahle ibe nokubonakala kwe-3,000 ayizinkulungwane, okusho ukuthi ihumushe kuphela ku- 22,50 $ kuphela.
Ukuze ukwandise inzuzo yakho kwividiyo enezikhangisi, kuzodingeka wazi ukuthi iziphi izikhangiso ezisebenza kahle kunani okuqukethwe. Uma kungumzuzu omfushane we-3 idiiyo, isikhangiso se-pop-up singase sibe ngcono kunesiqeshana sesibili se-30: Ukusebenzisa uhlelo lozakwethu be-YouTube, kufanele ube nokufinyelela ku ikhasi le-analytics ku-YouTube ukunquma ukuthi yini ephumelela kakhulu kulabo abalaleli bakho.
Umthamo wamanje phakathi kwabadali bokuqukethwe yikusetshenziswa kwezidumbu zabantu abaningi futhi amapulatifomu amabili amakhulu kunazo zonke manje I-Kickstarter futhi I-Patreon. Umehluko phakathi kokubili yilokho okwakunjalo kusezimali ezixhaswe ngephrojekthi kanti enye enye uhlobo oluphindaphindiwe. Ukuqoqwa kwezimboni kuyindlela ուժեղացնել kakhulu yokubeka amathaya ukuvuza abalandeli bakho ngokushintsha imali enkulu: Izibonelo ezimbalwa zemiklomelo Yesithathu kukhona okuqukethwe okukhethekile kumalungu akhokhelwayo, izingxoxo zomuntu ngamunye, kanye nokuthengiswa okukhethekile.
Ku-Kickstarter, usethe ikhasi leprojekthi ngenani lemali oyidingayo ukuqedela iphrojekthi yakho. Abantu base bethemba kuso futhi uma ulawula ukufinyelela imigomo yakho esikhathini esinqunyiwe, uzothola izimali. Imiklamo ye-kickstarter iningi kakhulu emvelweni ngamanye amaphrojekthi afinyelela kwizigidi zamaRandi ngemali.
Eziningana eziphawulekayo njenge- I-Kung Fury ikwazi ukuqoqa imali engu- 600,000 $ yezimali kusuka ezifungo zayo.
Kungenzeka ukuthi uthole ukuthi u-YouTubers ubiza i-Patreon ekhaya ngoba inganikeza umthombo ongenamathele weholo uma kuqhathaniswa ne-Kickstarter. Ngokufanayo ne-Kickstarter, usungule ikhasi elinemigomo yokuxhaswa ku-Patreon, umehluko wukuthi umgomo wenkxaso yenyanga njalo kunomuntu owodwa: I-YouTubers nabadali bokuqukethwe njengawe Jim Sterling futhi I-Red Letter Media ziyizibonelo ezinhle zamakhasi we-Patreon aphumelelayo ngemali engaphezulu kwe $ 12,000 ne- 19,000 $ ngokulandelanayo, nyangazonke.
Kulula ukucabanga ukuthi njenge-YouTubers, konke okumele ukwenze kungukuzijabulisa ngekhamera. Kodwa iqiniso le ndaba, ukuthi u-YouTuber kusho ukusebenza ngaphandle kwekhamera ukuhlela futhi cwaninga okuqukethwe kwakho, ukuthola izindlela zokwenza imali ngokuphumelelayo, futhi uqiniseke ukuthi unayo imali eali.
Kuyo yonke indaba ye-PewDiePie impumelelo, kunamanye amanye ama-YouTubers abesazama ukukwenza ku-YouTube futhi asinda. Yingakho abadali bokuqukethwe banqume ukungathembeki kuphela ku-YouTube njenge-platform yabo yokusatshalaliswa.
Ku-201, uJimmy Tatro waqala "I-TheJimmyTatroChannel," eyashintshwa kamuva yaba "LifeAccordingToJimmy. "I-Tatro ibonakala ibhekene nesichungechunge se-Netflix" i-American Vandal- ը. "; kanye nama-film "22 Անցեք փողոց" ոչ- "Մեծացել է 2-ը".
Ukwenza imali isithandwa sakho sikuzwakala kanjani？ Kuhle kahle kakhulu? Hhayi，kuthiwani uma ungakwenza ngokunethezeka kwekhaya
Ukwenza имате isithandwa sakho sikuzwakala kanjani? Kuhle kahle kakhulu? Hhayi, kuthiwani uma ungakwenza ngokunethezeka
Ukència imali aquíhandwa sakho sikuzwakala kanjani? Kuhle kahle kakhulu? Hhayi, kuthiwani uma ungakwenza ngokunethezeka